गर्भवती महिला दिदीबहिनीले के कस्ता खानेकुरा खादा उपयुक्त हुन्छ ? जानकारी लिनुहोस – सुदूरखबर डटकम
गर्भवती महिला दिदीबहिनीले के कस्ता खानेकुरा खादा उपयुक्त हुन्छ ? जानकारी लिनुहोस
हामीलाई थाहा छ, गर्भवती र सुत्केरी अवस्था हरेक कुराले संवेदनशील अवस्था हो। यस्तो अवस्थामा अन्य समयमा भन्दा बढी हेरचाहको आवश्यकता पर्छ।गर्भवती अवस्थामा राम्रो ख्याल गर्न सकियो भने आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक प्रभाव रहन्छ।
हुन त हामी सबैलाई यो बेला कस्तो खाने भन्ने सामान्य जानकारी छँदैछ। तर कस्तो खाना कसरी तरिका मिलाएर खाने गर्नुपर्छ।